‘ब्रेन डेथ’ भएका व्यक्तिको मिर्गौला दुई व्यक्तिमा प्रत्यारोपण - Naya Patrika
‘ब्रेन डेथ’ भएका व्यक्तिको मिर्गौला दुई व्यक्तिमा प्रत्यारोपण
अर्जुन अधिकारी, काठमाडौं | जेठ ०१, २०७४
गोविन्दप्रसाद तिमल्सिना / मिलन श्रेष्ठ
मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले नेपालमा पहिलोपटक मस्तिष्क मृत्यु (ब्रेन डेथ) भएका व्यक्तिको मिर्गौला दुई व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गरेको छ । गत बिहीबार गाडीको छतबाट झरेर गम्भीर घाइते भएका सिन्धुली निवासी ३० वर्षीय गोविन्द भुजेलको मस्तिष्क मृत्युपछि दुई मिर्गाैला झिकी मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले फरक दुई व्यक्तिमा सफल प्रत्यारोपण गरेको हो ।
सडक दुर्घटनामा परेर वा कुनै कारणवस मस्तिष्क मृत्यु भएकाको अंगदान गर्न सरकारले मानवशरीरको अंग प्रत्यारोपण नियमावली १६ मंसिर २०७३ मा पास गरेको थियो । ‘सो नियमावली पास भएको पाँच महिनापछि मस्तिष्क मृत्यु भएकाको अंग लिन र प्रत्यारोपण गर्न सफल भएको मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले बताए । ‘कान्तिपुर अस्पतालमा उपचारका लागि सिन्धुलीबाट भुजेललाई ल्याएको रहेछ । उनको टाउकामा गम्भीर चोट लागेर उपचार गराउँदै गर्दा मस्तिष्क मृत्यु भएपछि अस्पताल प्रशासनले हामीलाई खबर गरेको हो,’ उनले भने, ‘हामी तत्काल अस्पताल पुग्यौँ र उनका परिवारसमक्ष लामो परामर्शपछि पहिलोपटक मस्तिष्क मृत्यु भएकाको अंग लिन सफल भएका हौँ ।’
पाँचौँ प्रयासमा अंग लिन सफल
मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले पाँचौँपटकमा मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिको अंग लिन सफलता हात पारेको हो । केन्द्रका निर्देशक श्रेष्ठको नेतृत्वमा गत बिहीबार मस्तिष्क मृत्यु भएका गोविन्द भुजेलको दुइटा मिर्गौला झिकेर दुई फरक व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गरिएको छ । श्रेष्ठले भुजेलबाट निकालिएको दुई मिर्गौला सुनसरीका ५१ वर्षीय गोविन्दप्रसाद तिमल्सिना र काठमाडौं लाजिम्पाटका १५ वर्षीय मिलन श्रेष्ठमा प्रत्यारोपण गरिएको बताए ।
‘भुजेलको मस्तिष्क मृत्यु भएलगत्तै हामीले जानकारी पायौँ । हामीसँग दुई व्यक्ति तयारी अवस्थामा थिए । लामो समयको छलफलपछि मृतकका परिवार राजी भए । उनीहरूले अंग निकाल्न मञ्जुरीनामा दिएपछि तत्काल हामीले उनको दुई मिर्गौला निकालेर अन्यमा प्रत्यारोपण गरेका हौँ,’ श्रेष्ठले भने । केन्द्रले भुजेलको दुई मिर्गौला मात्रै निकालेको थियो । अंग दान गरेका विषयमा परिवार खुसी छन् । ‘यो समग्र नेपालीको सफलता हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘कुहिएर र जलेर जाने अंगदान गर्दा धेरैको ज्यान बचाउन सकिने भएकाले मस्तिष्क मृत्यु भएकाको अंगदान गर्न आममानिसमा बुझाउन आवश्यक देखिएको छ ।’
मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरिएका दुवै व्यक्ति स्वस्थ
मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरिएका गोविन्दप्रसाद तिमल्सिना र मिलन श्रेष्ठ दुवै व्यक्ति स्वस्थ छन् । उनीहरूलाई एकदुईदिनभित्रै घर पठाउने तयारीमा केन्द्र लागेको छ । विगत पाँच महिनादेखि केन्द्र मस्तिष्क मृत्यु भएकाको अंग लिने प्रयासमा लागेको थियो । चार महिनाका बीचमा नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज र वीर अस्पतालमा गरेको प्रयास असफल भएपछि केन्द्रको योजना संकटमा परेको थियो । अस्पतालहरूले सडक दुर्घटनामा मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको अंग लिन बोलाए पनि परिवारका सदस्यले अनुमति नदिँदा केन्द्रले जनचेतनाको अभाव भएको महसुस गरेको थियो ।
पाँच महिनापछि गत बिहीबार ४ बजे कान्तिपुर अस्पतालबाट केन्द्रलाई ‘एक युवकको मस्तिष्क मृत्यु भएको छ, आउनुस्’ भनी फोन आयो । भुजेललाई उपचारका लागि सो दिन बिहान ११ बजेर ४५ मिनेटमा अस्पतालमा भर्ना गरिएको कान्तिपुर अस्पतालले जनाएको छ । अस्पताल स्रोतका अनुसार उपचार गर्दागर्दै दिउँसो ४ बजे चिकित्सकहरूले भुजेललाई मस्तिष्क मृत्यु भएको घोषणा गरेका थिए ।
खबर पाउनासाथ केन्द्रको टोली ४ बजेर २० मिनेटमा अस्पताल पुगेको निर्देशक श्रेष्ठले बताए । केन्द्रबाट गएको चिकित्सकहरूको टोली र मृतक परिवारका सदस्यसँग ६ बजेसम्म छलफल भएको उनको भनाइ छ । लामो छलफलपछि जलाएर खरानी बनाउनुभन्दा दुई अंगले दुई व्यक्ति बचाउन सकिन्छ भन्नेमा परिवारका सदस्य राजी भएपछि ६ बजे भुजेलको अप्रेसन सुरु भएको थियो । राति १० बजे अप्रेसन सम्पन्न भएको थियो । साढे १० बजे तिमल्सिना र श्रेष्ठमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको निर्देशक श्रेष्ठले बताए ।
विकसित मुलुकमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी मस्तिष्क मृत्युपछि प्रत्यारोपण
प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले विकसित मुलुकमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी अंग प्रत्यारोपण मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिको अंगबाट हुने बताए । एकजना मस्तिष्क मृत्यु भएको व्यक्तिबाट दुई मिर्गाैला, दुई फोक्सो, एक मुटु, एक कलेजो, एक प्यानक्रियाज, एक सानो आन्द्रा, दुई आँखाका नानी तथा छालालगायत अंगदान गर्न मिल्छ । केन्द्रले २०६९ माघबाट मिर्गाैला प्रत्यारोपण सुरु गरेको हो ।